बादललाई एमाले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी ! - नेपालबहस
बादललाई एमाले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी !
| १६:१५:२३ मा प्रकाशित
२६ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा साविकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदिएपछि नेकपा खारेज भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट एमालेतर्फ लागेका नेताहरुलाई सम्मानजनक हैसियत दिने तयारी प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका छन्।
ओलीले माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई नेकपा ‘एमाले’ मा सम्मानजनक स्थान दिने तयारी थालेका हुन् । सोही अनुसार गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई एमालेको उपाध्यक्ष बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, दावा लामा र गौरीशंकर चौधरीसहितका नेताहरुलाई एमालेमै राख्ने गरी ओलीले तयारी गरेका छन् । जसअनुसार बादललाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो । काठमाडौंमा भएको नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेकी विद्या भण्डारी अहिले राष्ट्रपति भएकी छन् । विद्या राष्ट्रपति भएपछि रिक्त उक्त स्थानमा बादललाई लाने तयारी गरिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका सांसदहरू पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनको पक्षमा उभिएका थिए । उनीहरू सबैलाई ओलीले मन्त्री बनाएका छन् । अहिले पूर्वमाओवादीका प्रभु साह, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामा मन्त्री छन् ।
नेकपा एमालेको विधानमा अन्य पार्टीबाट आउनेका लागि २० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय सदस्य बनाउने व्यवस्था छ । त्यही अनुसार नै अहिले माओवादी केन्द्रका नेता तान्ने रणनीति एमालेले अख्तियार गरेको हो ।
ओली र नेपालबीचको भेटवार्ता सकियाे ११ घण्टा पहिले
जसपा: ठाकुर पक्षको बेग्लै भेला १२ घण्टा पहिले
एमाले विभाजन र विसर्जनको डिलमा १३ घण्टा पहिले
नेपाल समूहको जबाफ: ओली कदम विधानविपरीत १३ घण्टा पहिले
आज पनि भेट्न ओलीको नेपाललाई प्रस्ताव १४ घण्टा पहिले
टीकापुर पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा १० घण्टा पहिले
कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब लिँदै स्वास्थ्यकर्मी १३ घण्टा पहिले
मनाङमा च्याङ्ग्रा खान गएको हिउँ चितुवा खोरमै थुनियो १६ घण्टा पहिले
आजदेखि एमाले मुख्यालय थापाथलीबाट सञ्चालन १५ घण्टा पहिले
बन्दाबन्दीमा सुनसान देखिएको नेपालगञ्ज १३ घण्टा पहिले
४२ करोडको लागतमा पाँच पुल निर्माण हुँदै ११ घण्टा पहिले
भक्तपुरमा टिपर र बाईक ठोक्किँदा एकको मृत्यु १० घण्टा पहिले
भारतबाट फर्किएकी ४० बर्षिया महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु ३ दिन पहिले
डमरा सडकखण्डमा पक्की कल्भर्ट बनाइँदै १६ घण्टा पहिले
एस्ट्रिक टेक्नोलोजीद्धारा वर्ल्ड वार फोर-इन्ड गेम्स लन्च ७ दिन पहिले
भारतबाट घर फर्किने सुदूरपश्चिमेलीको लर्को ४ हप्ता पहिले
झापामा जङ्गली हात्तीको आतङ्क ४ हप्ता पहिले
बडिगाड झडप घटनामा संलग्न आठ सार्वजनिक ३ हप्ता पहिले
पशुपतिमा देशोद्धार पूजाका निम्तालुलाई स्वागत गरिँदै २ हप्ता पहिले
चितवनमा भेटियो नयाँ प्रजातिको चरा ४ हप्ता पहिले
क्यानाडाले अघि बढायो विशाल आर्थिक सहायता कार्यक्रम १२ महिना पहिले
४८ परीक्षार्थीले एसइई दिन नपाउने २ वर्ष पहिले
अन्तरजातीय भिडन्तका क्रममा मालीमा ४० को मृत्यु १ वर्ष पहिले
दाउरा बोकेको ट्र्याक्टर दुर्घटना : एकको मृत्यु,१३ घाइते १ वर्ष पहिले